China ewepụtala atụmatụ nke ihe nrite Olympic nke Beijing 2022
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » China ewepụtala atụmatụ nke ihe nrite Olympic nke Beijing 2022
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • omenala • Entertainment • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • nzukọ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
China ewepụtala atụmatụ nke ihe nrite Olympic nke Beijing 2022.
Akpọrọ ya “Tongxin”, nke pụtara “Nkọwa dị ka otu”, ihe nrite ahụ nwere mgbanaka concentric ise na-egosipụta nkà ihe ọmụma ọdịnala China nke nkwekọ n'etiti eluigwe, ụwa na mmadụ.
Mwepụta nke ihe nrite ndị a bụ akara ụbọchị 100 gbagoro egwuregwu.
N'ịbụ onye na-akwado asọmpi Olimpik Summer nke afọ 2008 nke ọma, n'oge na-adịghị anya Beijing ga-abụ obodo mbụ mebere ma mbipụta ọkọchị na oyi nke ihe nkiri egwuregwu zuru ụwa ọnụ.
Ndị nhazi Beijing 2022 egosila ahụike na nchekwa nke ndị sonyere ya dị ka ihe kacha mkpa ha.
Ihe na-erughị otu izu ka ire ọkụ Olympic rutere China ka agbachara ya na Olympia Ancient Greece, Beijing afọ 2022 Ekpughere imepụta ihe nrite Olympic taa.
China's isi obodo mere ememe 100-ụbọchị agụta na Egwuregwu Ugwu Olimpik nke 2022 na Tuesday na ihe ọzọ dị ịrịba ama dị ka nkwadebe maka Beijing afọ 2022 banye n'ọkwa ikpeazụ ha.
Akpọrọ ya “Tongxin”, nke pụtara “Nkọwa dị ka otu”, ihe nrite a nwere mgbanaka concentric ise na-egosipụta nkà ihe ọmụma ọdịnala China nke nkwekọ n'etiti eluigwe, ụwa na mmadụ. Mgbanaka ndị ahụ na-egosipụtakwa mgbanaka Olympic, nke a kpụrụ n'ime okirikiri, na mmụọ Olympic na-ejikọta ụwa site na egwuregwu.
Ihe nrite a sitere na mpempe jadeware ndị China akpọrọ “Bi”, diski jed abụọ nwere oghere okirikiri dị n'etiti. Dị nnọọ ka a na-ewere jed dị ka ihe ịchọ mma mara mma na nke bara uru na omenala ndị China, ihe nrite a bụ ihe akaebe nke nsọpụrụ na mgbalị na-adịghị akwụsị akwụsị nke ndị na-eme egwuregwu.
Ebe ọrịa COVID-19 ka na-efe efe n'ọtụtụ akụkụ ụwa, Beijing afọ 2022 Ndị nhazi egosila ahụike na nchekwa nke ndị sonyere dịka ihe kacha mkpa ha.
E bipụtara mbipụta mbụ nke akwụkwọ egwu egwu Beijing 2022 na Mọnde, na-enye ndị na-eme egwuregwu na ndị isi iwu iji hụ na enwere ike ibuga egwuregwu Olympic Winter na Paralympic nke afọ na-abịa n'enweghị nsogbu n'oge ọrịa a.
Akwụkwọ egwuregwu abụọ a, otu maka ndị na-eme egwuregwu na ndị isi otu, yana otu maka ndị ọzọ niile metụtara, na-ekwu maka usoro mgbochi COVID-19, gụnyere njikwa mechiri emechi, ịgba ọgwụ mgbochi na nnwale.
Dịka e kwuputara na mbụ, ndị niile gbachara ọgwụ mgbochi ọrịa COVID-19 agaghị adị mkpa iche iche maka ụbọchị iri abụọ na otu mgbe ha rutere. China ma nwee ike tinye "usoro nlekọta emechi emechi". A ga-anwale ndị nọ n'ime sistemụ njikwa mechiri emechi kwa ụbọchị maka COVID-19.
A ga-ebipụta mbipụta nke abụọ nke akwụkwọ egwu egwu na Disemba.
Kemgbe Ọktọba 5, usoro asọmpi mba ụwa emeela na National Speed ​​Skating Oval na Capital Gymnasium na ogbe ndịda Beijing, yana National Sliding Center na Yanqing iji nwalee ọrụ dị ka ịme ice, oge na akara akara, njide COVID-19. , nchekwa na njem.
Ihe omume nke ọnwa Nọvemba ga-ahụ egwuregwu asọmpi iko mba ụwa ga-esochi mmemme iko mba ụwa maka ịkwọ ụgbọ mmiri na freeski, yana mmemme asọmpi Continental maka ịwụ ski na Nordic jikọtara ọnụ na Disemba.
A na-eme atụmatụ na ihe dị ka ndị egwuregwu 2,000 esenidụt na ndị ọrụ nkwado na-etinye aka na mmemme nnwale ahụ, na-enye ndị na-ahazi ohere ịnwale ụlọ ọrụ na ọrụ tupu Beijing 2022.